China North America- CTIA Service uye Kuyedza | MCM
Chii chinonzi CTIA CERTIFICATION?
CTIA, kupfupikiswa kweCellular Telecommunications neInternet Association, isangano risingabatsiri revanhu rakagadzwa muna1984 nechinangwa chekuvimbisa kubatsirwa kwevanoshanda, vagadziri nevashandisi. CTIA ine vese vashandisi veUS uye vagadziri kubva kune nharembozha masevhisi, uye zvakare kubva kune isina waya data data uye zvigadzirwa. Ichitsigirwa neCCC (Federal Communications Commission) neCongress, CTIA inoita chikamu chakakura chemabasa nemabasa ayo aishandiswa kuitwa nehurumende. Muna 1991, CTIA yakagadzira isina rusarura, yakazvimirira uye yepakati chigadzirwa kuwongorora uye setifiketi sisitimu isina waya indasitiri. Pasi pechirongwa ichi, zvigadzirwa zvese zvisina waya muvatengi giredhi zvinotora bvunzo dzekuteerera uye izvo zvinoteedzana nematanho akakodzera vachapihwa kushandisa CTIA kumaka uye kurova masherufu ezvitoro emusika wekutaurirana weNorth America.
CATL (CTIA Authorized Testing Laboratory) inomiririra marabhoritari anotenderwa neCTIA kuyedza uye kuongorora. Miedzo yekuyedza yakapihwa kubva kuCATL yaizove yese inogamuchirwa neCTIA Nepo mimwe miedzo yekuyedza uye mhedzisiro kubva kune isiri-CATL isingazo zivikanwe kana kuwana mukana weCTIA. CATL yakagamuchirwa neCCTIA inosiyana mumaindasitiri uye zvitupa. CATL chete ndiyo inokodzera bhatiri kuteedzera bvunzo uye kuongorora ndiko kuwana bhatiri chitupa chekuteerera IEEE1725.
▍CTIA Maitiro Ekuyedza Bhatiri
a) Chitupa Chinodikanwa cheBattery system Kuteerera kune IEEE1725-- Inoshanda kuBattery Systems ine imwechete sero kana akawanda maseru akabatana mune yakafanana;
b) Chitupa Chinodikanwa cheBattery system Kuteerera kune IEEE1625-- Inoshanda kuBattery Systems ine akawanda maseru akabatana mukufanana kana mune ese ari maviri akafanana uye akateedzana;
Matipi anodziya: Sarudza pamusoro pechitupa zviyero nenzira kwayo mabhatiri anoshandiswa munhare mbozha uye makomputa. Usashandise zvisizvo IEE1725 yemabhatiri ari munhare mbozha kana IEEE1625 yemabhatiri mumakomputa.
● Yakaoma Tekinoroji: Kubva 2014, MCM yanga ichienda kumabhatiri pack musangano unoitwa neCTIA kuUS gore rega, uye inokwanisa kuwana yazvino kugadzirisa uye nekunzwisisa mitezo mitsva yemitemo nezve CTIA mune imwe nzira inokurumidza, yakarurama uye inoshanda.
●Kufanirwa: MCM ndeye CATL yakagamuchirwa neCCTIA uye inokodzera kuita maitiro ese ane chekuita nesitifiketi kusanganisira kuyedza, kuongorora kwefekitori uye kurodha kurodha.
Pashure: IECEE- CB
Zvadaro: Kutakura- UN38.3
Ctia Certification Mutengo
Ctia Certification Maitiro
Ctia Certification Sevhisi
Ctia Lead Nguva
Ctia technical Zvinyorwa
Ctia technical Inodikanwa
Ctia Bvunzo Zvinhu
Ctia Bvunzo Nzira
Ctia Bvunzo Bvunzo
Ctia Kuedza Lab
Ctia Kuedza Laborator
Ctia Kuedza Mutengo
Ctia Kuedza Service
Ctia Kwayedza Nguva